Maalinta: Sebtember 9, 2018
Wadahadalka Faalska ah ee Kanal Istanbul
Kanal Istanbul ayaa ajandaha u ah Guddiga Gobolka ee Ilaalinta Hantida Dabiiciga ah. Marka loo eego Hazal Ocak oo ka socda Jamhuuriyadda, Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka iyo Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha, Istanbul 4 No. [More ...]
Rector of Sivas Cumhuriyet University Prof. Alim YILDIZ, waxaan booqday xafiiska gudoomiyaha waxaanan gaarsiiyay rabitaanka sanadka cusub ee tacliinta dalkeena iyo jaamacada. Kaabayaasha dhaqaalaha ee CU iyo shaqooyinka wadada [More ...]
Leutheusser: "Taageerada ka Germany Turkiga doonaysaa Tareennada"
Wargeyska todobaadlaha ah ee Jarmalka ka soo baxa ee Der Spiegel ayaa sheegay in dowladda Turkiga ay qorsheynayso in ay casriyeeyso tareennada waddanka taakuleyn dhaqaale iyo taageero farsamo ee Jarmalka. Turkey hubaa furitaanka mashruuca cusub ee German-xawaaraha sare ee caalamiga ah line tareenka [More ...]
Artvinliler ayaa diyaarin doonta diyaaradda 2020
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, ayaa sheegay in aragtida ah in hoos u dhaca maalgashiga la kordhiyay waqti ka waqti, "Kuwani gabi ahaanba run ma ahan, maalgashigeenna wuu sii socon doonaa, ayuu sii wadaa." Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
Ololaha Cusub ee Qiimaha Afyonkart
Dawlada Hoose ee Afyonkarahisar, taas oo keenta isfaham cusub oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha degmada Afyonkarahisar Degmada Yüntaş A.Ş. Ololaha cusub ayaa bilaabmay ka hor sanad dugsiyeedka cusub ee Afyonkart, kaas oo loo adeegsaday basaska dadweynaha ee ay xireyso Halkbank, waa faa iido weyn u leh ardayda iyo waalidiinta. [More ...]
Gaadiidka burcad-badeedda la hubiyey
Waaxda Gaadiidka Dawladda Hoose ee Magaalada Manisa, si looga hortago gaadiidleyda burcad badeedda iyo kormeerooyinka soo noqnoqda. Wajahadan dhexdeeda, 90 saddexdii bilood ee la soo dhaafay intii lagu gudajiray baaritaanka hanti-dhowrka ee ay fulisay dowladda hoose ee Manisa ee degmada Salihli. [More ...]
Laba xero oo muhiim ah oo ku yaala Kayseri ayaa la kulmay wadiiqooyinka
Madaxweynaha Celik, General Hulusi Akar Boulevard marka laga gudbo laba marin oo kaladuwan oo loo sameeyay gaadiid ayaa la furi doonaa dhowaan, ayuu yidhi. Mid ka mid ah halbowlayaasha ugu muhiimsan ee Kayseri, Mustafa Kemal Pasha Boulevard sii wadida [More ...]
Maanta ee Taariikhda: 9 Sebtembar 1861 Bag-Xukun-Kutubka
Maanta taariikhda 9 Sebtembar 1855 Boqortooyadii Cusmaaniyiinta Istanbul-Edirne-Varna iyo dhismaha khadka khadka taleefanka ee 'Varna-Balaklava' ayaa la dhammeystirey oo la galiyay adeeg. 9 Sebtembar 1861 Khadka qaxwada ee 'Bagged-Executioner' (11 km) ayaa la furay. 9 Sebtember 1882 Mehmet Nahid [More ...]